Portrait/ Noro, olon’ny asa sôsialy | Grandir à Antsirabe
PORTRAIT : I Noro, tompon’andraikitra ny Fandaharanasa ho Fiarovana ny Ankizy Miaina eny an-dalambe (PPER) Grandir à Antsirabe nanomboka ny taona 2015. Mampahafantatra antsika azy izy tamin’ny resadresaka nifanaovana taminy.
Noro, mba lazalazao fohy aminay hoe ny lalana efa nizoranao ?
Mpanabe, io asa niandraiketako tamin’izaho niasa voalohany tato amin’ny fikambanana ny taona 2007. Avy eo dia lasa tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fitantanana ny kilasy mandry (internat) tato amin’ny fikambanana aho, izay efa nisolo ny Fandaharanasa ho Fiarovana ny Ankizy miaina an-dalambe (PPER). Amin’izao fotoana izao kosa aho dia tompon’andraikitra voalohany amin’ny fandrindrana io Fandaharanasa io (Activités Jour, Equipe Mobile d’Aide, Centre d’Hébergement Temporaire, Accompagnement Social). Manampy ihany koa amin’ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo ekipa mandrafitra ny Fandaharanasa.
Fa inona ary no nanosika anao hiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe e ?
Indray andro izay a ! nanao « entretien » tamina asa hafa izay aho. Rehefa vita ilay izy dia nentin’ilay lehibe nitsidika trano iray izay aho. Nony nandroso tao amin’ilay trano izahay dia nahita zaza narary natory teo ambony fandriana. Tena narary mafy ilay zaza, hany ka vao niditra tao amin’ilay efitra dia fofona ratsy aoka izany no niainana. Rehefa nivoaka tao izahay dia lasa nisaiko, nandona ahy loatra ny zavatra hitako. Nizara roa ny saiko avy eo, ny iray nanao hoe « zory ny lalanao » ny iray nanao hoe « ampio izy ». Nanomboka teo dia nitsiry tato anatiko ny fahavonona hanampy ny mpiara-belona amiko ary iny sehon-javatra iny no manosika ahy nisafidy asa manampy ny madinika.
Ho avy manao ahoana no irianao ho an’ny fikambanana ?
Mirary an’ny Grandir à Antsirabe aho hihalehibe, hihalehibe sy hitombo hatrany araka ny anarany. Maniry koa ny mba hisiana fikambana hafa toa azy any amin’ireo renivohitra hafa. Ary frany dia indray andro any enga anie mba ho afaka hanokatra ivon-toeram-panofanana isika mba ahafan’ireo ankizintsika mandray an-tanana feno ny ho aviny.
Misy fahatsiarovana nanamarika an’i Noro ary ve hatramin’ny niasan’i Noro tato ?
Jaguar noho ny hatsaran’ny endriny, ny volony sy ny hafainganany.
Ny tenako ihany angamba, isika rehetra izao mantsy dia tokony ho izany avokoa, hiasa ho an’ny filaminana sy fampandrosoana ny toerana misy antsika.
Raha zava – maniry indray ?
Bozaka maintso, tsara ery ny mandeha eny amboniny tsy manao kapa na kiraro. Mafianaritra aoka izany ihany koa ny matoritory eny amboniny. Sady tena tiko ny mijery azy ireny.
Olona tsy dia mba be resaka aho fa rehefa afaka entitra tsara kosa amin’ny fotoana ilaina azy.
« Jamais un échec, toujours une leçon. »